ရာသီဖွားများနဲ့ မီး၊ရေ၊လေ၊မြေ "(Zodiac signs and the elements)
Astrology General Knowledge Knowledge
Soup for Souls အတိုအထွာစာပေများ
Save Flood Victims
ရာသီဖွားများနဲ့ မီး၊ရေ၊လေ၊မြေ "(Zodiac signs and t...
Dynasty Warriors7XL PC English Patch (Partial)
This isapartial patch for Dynasty Warriors7Xtreme Legends on PC. This patch is incredibly crash-heavy, especially around equipping seals. I'm not able to fix it because I'm terrible at ASM. Use this patch at your own risk, and expect crashes.
Use the original exe rather than the patched one to stop the crashes. Strings will then be cut off however.
Size ကြီးကြီး ဖိုင်တွေ သီချင်းတွေ ဓာတ်ပုံတွေ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဘယ်လို ဝေမျှကြသလဲ
အခုဆိုရင် အင်တာနက်လိုင်းက အတော်လေးကောင်းမွန်လာပြီး အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် လူကြီးလူငယ်မရွေး အဆင်ပြေ သက်သာလွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ လူတွေဟာ ဖုန်းတို့ ကွန်ပျူတာတို့ တက်ဘလက်တို့ အများကြီးပိုင်ဆိုင်လာသည်နဲ့အမျှ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ သိမ်းဆည်းပြီး ကိုယ်အသုံးပြုလိုတဲ့ ဖုန်းထဲ ပြန်ထည့်ယူခြင်းဟာ အနည်းငယ် အလုပ်ရှုပ် စိတ်ရှုပ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ထည့်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ နေရာနည်းနေလျှင်လည်း တော်တော်လေးခေါင်းစားရပါတယ်။ Cloud Service အသုံးပြုလျှင် အင်တာနက်ရှိလျှင် ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်မရွေး ကိုယ်လိုအပ်သည်များကို ယူနိုင်ပါတယ်။ နေရာမလောက်မှာကိုလဲ စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အများနဲ့လဲ ဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ share ချင်တဲ့ ဖိုင်ကို link ပေးရုံပါပဲ။ ယူမယ့်သူက အဲဒီ link ကနေတစ်ဆင့် ဒေါင်းယူရပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ ဖိုင်တွေ သီချင်းတွေ ဓာတ်ပုံတွေကို အီးမေးလ်ကနေတစ်ဆင့် ဝေမျှခဲ့ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ရင် ပမာဏအများကြီး ပို့လို့မရပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထက်များသွားရင် ကိုယ်ပို့တဲ့ အီးမေးလ်က ပို့လိုတဲ့လူဆီ မရောက်တော့ပ…
ကျန်းမာရေး အတွက် ဂရုစိုက်ရမည့် နာရီများ
ကျန်းမာရေး အတွက် ဂရုစိုက်ရမည့် နာရီများသုတေသန ပြုချက်အရ ညဆိုင်း အလုပ်လုပ် သူများသည် ကျန်းမာရေး အခြေ အနေ ကမောက်ကမ ဖြစ်တတ်သည်။
အမျိုးသမီးများ ဆိုလျှင် ရာသီမမှန်ခြင်း၊ အရိုးပွ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ရင်သား ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် မရရှိနိုင်ခြင်း စသည့် ရောဂါများ ပိုမို ဖြစ်တတ်သည်။ ညသန်းခေါင် ည ၁၂-နာရီ ၁၀-မိနစ်အထိ မအိပ်သေး သူများတွင် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဇီဝ ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲ ဖြစ်စဉ်များသည် ကိုယ်တွင်း အရည် လောင်ကျွမ်းမှုကိုသာ အားကိုးရသည်။ ကိုယ်တွင်း အရည်လောင် ကျွမ်းမှုသည် အဆိပ်အတောက် ဖြစ်ပေါ်မှု များတတ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်၏ 'သက်စောင့်ရည်' များကို အက်ဆစ်ဓါတ် ဖြစ်စေ နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခဏခဏ အိပ်ရေး ပျက်ခံ သူများသည် ဆေးလိပ်သောက်၊ အရက်သောက်သူများ ဖြစ်နိုင်သည့် ရောဂါမျိုးများ ငါးဆ ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ် အတတ်နိုင်ဆုံး ည ၁၁-နာရီ မတိုင်မီ အိပ်ရမည်။ မဖြစ်မနေ ညအလုပ်လုပ်ရန် ရှိသည် ဆိုလျှင်လဲ (အသားမပါသော) ညလယ်စာ စားလျှင် ခံသာသေးသည်။ နံနက်အခါ နေထွက်သည်။ ညနေရောက်လျှင် နေ၀င် သည်။ ဆောင်းရာသီ ပြီးလျှင် နွေရာသီ ရောက်လေသည်။ သဘာဝလော ကကြီးသည် အချိန်မှန်မှန်၊ စည်းချက်ကျကျ ဖြစ်ပျက်နေသည်။
Yat Sat Thwar Thu -ရက်စက်သွားသူ- (with English translation)
Vocalists: Ni Ni Khin Zaw (နီနီခင်ဇော်)
Album Name: Mario
Mixing: Naung Naung
You didn't know the pains of my heart.
ရင်ထဲက ဝေဒနာလေးတွေ နင်မသိခဲ့
yin htal ga way da nar lay twe nin ma thi' ke'
I can't feel. I can't leave you.
ငါမခံနိုင်ဘူးး မင်းနဲ့ခွဲခွာ တို့မဝေးရက်
ngar ma kan naing bu min ne' kwal kwar dot' ma way yet
Want to still love you like before.
အရင်လို ဆက်နေချင် သေးတယ်
ah yin lo shet nay chin tae dal
I admit that I love you more than you.
ဝန်ခံလိုက်မယ် မင်းထက် တို့က ချစ်တယ်
won kan light mal min htet dot' ka chit tal
Don't be happy knowing that I'm loving you more than you.
ပိုချစ်သော အသည်းတွေ ကြွှေရုံနဲ့ မင်းလေးမပျော်နဲ့
po chit taw ah tal dwe kway yone nat' min lay ma pyaw nat'